Nke a bụ ngwa DJI nnyemaaka 2 maka Mac na DJI gị drone | Esi m mac
Nke a bụ ngwa DJI Assistant 2 maka Mac na DJI gị drone
Otu n'ime ihe mbụ ị ga-adị njikere mgbe ịzụrụ DJI brand drone bụ ngwa maka Mac DJI Assistant 2. Ọ bụ ngwa ahụ pụtara afọ anọ gara aga na drones mbụ nke ika ahụ, ma ugbu a, ọ dị mkpa maka ọrụ ha.
N'oge na-adịbeghị anya, azụrụ m DJI Magic Pro drone, mmiri na-adịghị akwụsị iju m anya ma ọ bụ na nha na-ejigide ma na-enwe ike ịpịpụta ya, ha jisiri ike rụpụta ihe ịtụnanya na-anaghị akwụsị ịghọrọ ihe ịga nke ọma.
Otu n'ime njirimara kpakpando nke ngwaahịa nke Akara DJI bụ na ọ na-eme dị ka ọ dị na ngwaahịa Apple, ya bụ, ha nwere ike imeziwanye oge mgbe akara ahụ gbanwere ngwa ngwa ya na ngwanrọ ya. N'ihi nke a, mbata nke ngwa nwere ike ịmekọrịta ngwaọrụ na kọmputa dị mkpa.
Ihe niile malitere site na ngwa Windows, mana ọ wereghị DJI ogologo oge iji chọpụta na site na ngwaọrụ Apple, ngwa dara obere ma emelitere ngwaọrụ enweghị nnukwu nsogbu. Ọ bụ ya mere ha ji kee DJI Assistant 2 maka Windows na Mac.
Dị ka m gwara gị na mbido, mgbe ị zụrụ DJI brand drone, ị ga-etinyerịrị ngwa m chọrọ igosi gị taa ka ị nwee ike imelite ma ngwa ngwa na ngwanrọ. Iji mee nke a, ị ga-ebudata ngwa ahụ maka nke a, ị ga-aga peeji DJI, Họrọ ihe nlele nke drone gị wee gaa na ebe nbudata na ebe nrụọrụ weebụ nke drone.
Will ga-enwe ike ibudata DJI Assistant 2 site n'ọtụtụ peeji dabere na ụdị drone ị nwere, yabụ ọ bụrụ na ị banye na Magic Pro drone ị nwere ike ịchọta otu ngwa ahụ dị ka ị banye na ebe nrụọrụ weebụ Phantom 4 PRO. Ngwa njikwa bụ otu na ihe n'ezie mgbanwe bụ ngwa nke ngwaọrụ.
Ozugbo etinyere ngwa ahụ, ị ​​ga-enyocha ngwa ngwa nke ngwaọrụ ndị mejupụtara mmiri ahụ na, dịka ọmụmaatụ, na Magic Pro ị ga-emelite njikwa redio, batrị na mmiri n'onwe ya. Ọ bụ usoro a ga-eme ọtụtụ ugboro n'afọ ma ọ bụ na DJI anaghị akwụsị ịhapụ akụkọ maka drones ya.
Ozugbo etinyere ngwa ahụ, ị ​​ga-ejikọ onye njikwa ma ọ bụ drone na Mac na iji eriri UBS ma n'oge ahụ mepee ngwa ahụ ma gbanye mmiri mmiri ma ọ bụ ihe njikwa, dabere na ihe ị na-emelite. N'oge ahụ na DJI Assistant 2 windo akara ngosi ntụ ntụ na-egosi na aha ihe ị banyere. Ọ na-anọgide na gị ka ị pịa otu na usoro achọpụtazi ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla ọhụrụ femụwe n'ihu ibudata na melite.
Budata | DJI nnyemaaka 2
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Nke a bụ ngwa DJI Assistant 2 maka Mac na DJI gị drone
Ma ederede ozo bu ihe ederede. Afọ juru na ihe ọjọọ.
Pedro Rodas kwuru dijo
Email gị na-ekwu ya niile ... na-eche mgbe niile ihe ị na-amaghị ihe ọ bụ. Maka ndị anyị nwere DJI drone, anyị maara nke ọma ihe m na-akọwa na ya. Daalụ maka ichere. Ekele na ekele maka onyinye dị oke egwu. Anyị niile ga-amụta ihe n’aka ya.
Zaghachi Pedro Rodas
Akwụkwọ ikike ụlọ ọrụ maka Macs zụrụ na Australia ma ọ bụ New Zealand ga-abụ afọ 3
Finisar Sensor emeputa na-enweta ego siri ike n'aka Apple